Lockdown: nametraka indray ny curfew COVID-19 Belzika
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Belzika » Lockdown: nametraka indray ny curfew COVID-19 Belzika
Vaovao Mafana Belzika • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Oktobra 16, 2020
Nanapa-kevitra ny manampahefana any Belzika fa hampiditra a Covid-19 curfew ao amin'ny firenena manomboka ny 19 Oktobra, hoy ny praiminisitry ny fanjakana, Alexander De Croo.
Nohazavainy fa hanomboka amin'ny 00:00 maraina ka hatramin'ny 05:00 maraina ny tsy fahazoana mivoaka, ary ho sarotra ny herinandro ho avy. Nilaza ihany koa ny praiminisitra fa manomboka amin'ny 19 Oktobra dia ho voatery ho an'ny rehetra ny fifandraisan-davitra amin'ny asa, afa-tsy ireo izay tsy azo atao ny mivadika amin'io fomba fiasa io.
Belzika dia efa manana fitondrana sarontava tsy maintsy atao amin'ny fitateram-bahoaka sy amin'ny toerana rehetra eo am-baravarana. Ny mponina any Belzika dia mahazo mahazo olona tsy mihoatra ny efatra ao an-trano, raha toa izy ireo ka olona roa mandritra ny roa herinandro.
Ny minisitry ny fivezivezena Georges Gilkine koa dia nilaza fa ny trano fisakafoanana sy trano fisakafoanana rehetra any Belzika dia hakatona manomboka ny 19 oktobra. Noterena ny tompon'andraikitra hampiditra fepetra toy izany noho ny toe-javatra niharatsy tamin'ny fiparitahan'ny COVID-19, hoy ny fanazavan'ny minisitra.
Nandritra izay tapa-bolana lasa izay tany Belzika, ny isan'ny tranga vaovao an'ny COVID-19 dia nitombo 182 isan-jato. Hatramin'ny nanombohan'ny areti-mandringana tao amin'ny firenena, olona maherin'ny 190 no voan'ny virus coronavirus, tranga 10 327 no maty.
Matahotra ny karazany COVID-19 amin'ny fahalavoana
Ahoana ny fitsidihana an'i Saudi Arabia avy any UAE, Afrika atsimo ...
Mianjera ny fiaramanidina mpandeha ao Siberia, 19 ao anaty sambo ...
Krismasy Jamaika tamin'ny volana jolay hetsika napetraka amin'ny 22 Jolay